Home Wararka Ciyaaraha Barcelona oo u dhaqaaqday daafaca reer Turki kana Tirsan Liecester city Caglar...
Barcelona ayaa lala xiriirinayaa daafaca Leicester City Caglar Soyuncu xagaagan sida ay sheegayaan wararka kasoo baxayaan Spain Xiddiga heerka caalami ee dalka Turkiga ayaa ka mid ahaa ciyaartoydii ugu muhiimsan kooxda Brendan Rodgers wuxuuna soo bandhigay qaab ciyaareed aad u wanaagsan, oo uu ku jiro finalkii FA Cup ee ay la ciyaareen Chelsea.
Kooxda barcelona ayaa aaf ugu Liidato qeybta dambe ee difaaca waxaana qaab difaacasho xun sameeyeen Barcelona waqtiyadii la soo dhaafay Gerard Pique iyo Clement Lenglet barcelona ayaana isbedel daafac sameyn doonto xagaagaan waxaana durbaba si xor ah ugu yimid Eric Carcia.
Wararka ka soo baxa Spain ayaa sheegayaan in Barcelona ay damacsan tahay in Soyuncu oo haatan la jooga wadankiisa Turkiga waajibaadka qarankana kala qeyb qaadanayo UEFA Euro 2020 safkooda kusoo daraan.
25 jirka ayaa la rumeysan yahay inuu lee yahay qaab ciyaareedka Blaugrana oo kale madaama qaabkiisa ciyaareed uu u egyahay halyeeyga Barcelona Carles Puyol Tani waxay ka dhigtay xiddiga Foxes inuu yahay xulasho soo jiidasho leh oo Barcelona ay ku tixgelin karto xagaagan.
Wakiilada Soyuncu ma aysan sameynin wax isku day ah oo ay kaga qarin karaan xiisaha Barcelona sidoo kale ilaa iyo haatan Si kastaba ha noqotee, Leicester City wax cadaadis ah kuma saarna inay iibiyaan xiddiggooda daafaca, waxayna ku qaadan kartaa dalab weyn.
Previous articleHordhac: Kulanka Darbiga Portugal Vs Germany ee Euro 2020, Shaxda iyo Xidigaha Dhaawaca ah Kulankan
Next articleArgentina oo guul dahabi ah ka gaartay xulka Uruguay.